Maraykanka iyo Denmark oo ka wadahadlay arimaha burcad badeeda | raascasayrmedia.com
← Go’aamadii ka soo baxay Shirwaynihii wadatashiga beelaha Raascasayr iyo Laasasurad
March 15, 2011 · 9:39 pm
Maraykanka iyo Denmark oo ka wadahadlay arimaha burcad badeeda
Madaxweynaha dalka Maraykanka iyo Ra’iisul wasaaraha dalka Denmark oo kulan ku yeeshay wadanka Maraykanka ayaa waxaa ay sheegeen inay hal meel uga soo horjeesanayaan kooxaha buracad badeeda Soomaalida.
Kadib kulanka ay ku yeesheen Aqalka Cad ee looga arimiyo dalka Maraykanka, Madaxweyne Barak Obama iyo Ra’iisul Wasaaraha dalka Denmark Resmussen ayaa waxaa ay kaga wada hadleen arimo farabadan oo ay ka mid tahay dhibaatooyinka burcad badeeda Soomaalida ay ku hayaan Maraakiibta Ganacsi.
Mas’uuliyiintaani ayaa tilmaamay in dowladaha Maraykanka iyo Denmark ay ka go’antahay inay la dagaalamaan kooxaha burcad badeeda Soomaalida, waxaana ay sheegeen in ay caqabad weyn ku yihiin Maraakiibta ganacsi ee isaga kala gooshta Badwaynta Inida.
“Waxaan go’aansanay in aan si wada jir ah u bilowno qaab cusub oo aan kula dagaalamayno kooxaha burcad badeeda Soomaalida, ma’ahan oo kaliya inaan diiradda saarno amaanka badda oo kaliya iyo in aan maxkamadayno burcad badeeda balse waxaa mahuum ah inaan dhulka ugu daba tagno burcad badeeda” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha dalka Denmarka Resmussen.
Sidoo kale Madaxweynaha dalka Maraykanka Brack Obama ayaa sheegay in dowladaha Denmark iyo Maraykanka ay u soo diri doonaan xeebaha Soomaaliya ciidamo Mariinis ah oo la dagaalama kooxaha burcad badeeda oo wali halkoodii ka soo wada qafaalashada Maraakiibta iyo doomaha ganacsi.
Hadalka kasoo yeeray Madaxweynaha dalka Maraykanka Brack Obama iyo Ra’iisul wasaaraha dalka Denmark Resmussen ayaa waxaa uu imaanayaa xili kooxaha burcad badeeda Soomaalida ay gacanta ku hayaan qoys u dhashay dalkaasi oo ay sheegeen burcad badeeda hadii la’isku dayo in awood looga furto Muwadiniintaasi ay dili doonaan.